इस्लाम धर्मावलम्बीहरुका लागि ‘रमजान’ अनि यी पाँच आधार स्तम्भ ! « News24 : Premium News Channel
इस्लाम धर्मावलम्बीहरुका लागि ‘रमजान’ अनि यी पाँच आधार स्तम्भ !
काठमाण्डौ । इस्लाम धर्मावलम्बीहरुले एक महिना मनाउने महत्वपूर्ण पवित्र पर्व ‘रमजान’ सुरू भइसकेकाे छ ।
मुस्लिम समुदायका ब्यक्ति एक महिनासम्म दिनभर ब्रत बसेर यो पर्व मनाउने गर्दछन् । सुर्य उदाउनु अघि ‘सेहरी’ (मिठा खानेकुरा) खाएर शुरु हुने रोजा सुर्यास्त भइसकेपछि इफ्तार गरेपछि फुकाउने गरिन्छ । यस पर्वलाई प्रेम, भाइचाराको सन्देश दिने पर्वका रुपमा पनि लिइन्छ ।
रमजान महिना मुसलमानका लागि शुभ-लाभको महिनाको रुपमा लिने गर्दछन् । रमजान महिनालाई कुरानले धेरै ठूलो स्थान दिएको छ ।
एक महिनासम्म मनाइने यो चाडमा सात वर्षदेखिका सबै व्यक्ति अनिवार्य रोजा (उपवास) बस्नुपर्ने हुन्छ । इस्लामका पाँच आधार स्तम्भ इमान (आस्था), नमाज (प्रार्थना), हज (तीर्थ), जकात (दान) र कल्मामध्ये रोजा (व्रत) एक खम्बा हो । रमजान महिना दान गर्ने महिना पनि हो । धनाढयले गरिब र विपन्नलाई आर्थिक सहयोग, नयाँ नयाँ कपडाहरु (लुगा),जकात, फित्राहरु आर्थिक सहयोगको रुपमासमेत यस मुबारक महिनामा दान गर्ने गर्छन ।
घाम उदाउनुभन्दा डेढ घण्टाअगावै ‘सेहरी’ (खानेकुरा) खाएर प्रारम्भ गरिने रोजा घाम अस्ताएपछि फलफूल तथा मिठाइ खाएर समाप्त गरिन्छ । यो समयलाई रोजा खोल्ने समय भनिन्छ ।
नमाजको समयमा शरीरसँगै लुगाफाटो पनि शुद्ध राख्नु पर्ने कडा धार्मिक नियम छ । रोजाको समयमा श्रीमान् र श्रीमतीबीच शारीरिक सम्पर्क गर्न हुँदैन । शरीर र मन दुवै शुद्ध रहनु पर्ने रोजामा महिलाहरूको महिनावारी सुरू भएमा त्यो महिलाको रोजा हुँदैन र महिनावारी रोकिएपछि पुनः रोजा बस्नु पर्ने हुन्छ । जानेर थुक पनि निल्नु हुँदैन भने दिउँसो सबै मानिसले दतिवन गरी मुख धुनु पर्छ ।दिनभर केही पनि खान नहुने भएकाले ठूला मानिसहरूले सजिलै रोजा पूरा गरे पनि उमेर नपुगेकाले धेरै कठिनाइ भोग्नु पर्ने हुन्छ ।
आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुसलमानले रोजाको समयमा गरीब, दीनदुखीहरूलाई दान गर्नु पर्छ । दान धार्मिक नियमानुसार गर्नु पर्ने हुन्छ, यसमा कसैले कम, कसैले बढी भने हुँदैन । रोजाको समयमा मुसलमानहरूले आफ्नो सम्पतिको अढाइ प्रतिशत जकात (कर) निकाल्नु पर्छ । यस अतिरिक्त रोजाको अवधि पूरा गरिसकेपछि ‘इद’ को नमाज पढ्नुभन्दा पहिले जनही एक किलो ७ सय ५० ग्राम गहुँको दाम निकाल्नुपर्छ, जसलाई फित्तरा भनिन्छ । यो नियम संसारभरीका मुसलमानमा लागू हुन्छ ।
रोजा बस्नाले मानिसमा आज्ञापालन, अनुशासन, नम्रता, सत्प्रियता, संयम, सहनशीलता, सदाचारी, त्याग, परोपकार, दया, दानशीलता लगायतका आचरणमा विकास आउने विश्वास छ ।
तीस दिनको रोजा पूरा गरेपछि पुरूषहरू इदगाहमा र महिलाहरू एकान्त ठाउँमा गएर सामूहिकरूपमा नमाज पढ्ने गर्छन् र अन्त्यमा एक आपसमा अँगालो मारेर इदमुवारक भन्दै बधाई साटासाट गर्छन्। नेपालमा लगभग १० लाख रहेका मुसलमान राजधानी, पहाडी जिल्ला गोरखा र तराईका विभिन्न जिल्लामा छरिएर बसेका छन् ।